राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफको लगातार तेस्रो जित Global TV Nepal
साफ च्याम्पियनसिप लागि नेपाली टिमको घोषणा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिन काठमाडौंमा प्रदर्शन वर्षाले क्षति भएका सडकको निर्माण दशैँअघि सम्पन्न गर्न विकास समितिको निर्देशन मोडल रामशरणले ल्याए ‘सँगसँगै बसेर रुन मन छ’ (भिडियो सहित) ८ सय ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १ हजार २ सय ७९ संक्रमणमुक्त विद्यार्थी बिरामी भएपछि पर्वतका दुई विद्यालय बन्द एभरेष्ट प्रिमियर लिग : दोस्रो खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध प्रितिबाट युनिकोड | युनिकोडबाट प्रिति
राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफको लगातार तेस्रो जित
ग्लोवल टि.भी. मङ्लबार, माघ १३, २०७७ 0
राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा साविक विजेता एपीएफले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ ।
मंगलबार भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई २–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफले तेस्रो जित निकालेको हो । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा एपीएफलाई जित दिलाउन अन्जली कुमारी योन्जन र सरु लिम्बुले एक एक गोल गरिन् ।
बलियो टिम आर्मीविरुद्ध एपीएफले दुबै गोल पहिलो हाफमा गरेको थियो । जितसँगै एपीएफले ३ खेलमा ९ अंक जोडेको छ । एपीएफ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ । आर्मीको यो पहिलो हार हो । आर्मी ३ खेलमा ४ अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
त्यस्तै मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा पुलिसले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकासँग १–१ गोलको बराबरी खेल्यो । पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफ दुबै टोलीले गोल गरेका थिए । विदेशी खेलाडी मिथो रुथले ५३ औं मिनेटमा गोल गर्दै वालिङलाई अग्रता दिलाएकी थिइन् ।
तर, खेलको ६५ औं मिनेटमा रेखा पौडेलले पुलिसका लागि बराबरी गोल फर्काईन् । बराबरीसँगै पुलिसले ३ खेलमा ५ अंक जोडेको छ । वालिङको यो दोस्रो बराबरी हो । वालिङले ३ खेलमा २ अंक जोडेको छ ।
एभरेष्ट प्रिमियर लिग : दोस्रो खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध
ईपीएल : चितवन टाइगर्सले विराटनगर वारियर्सलाई २ विकेटले हरायो
एनभीए क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि सुरु हुँदै
ईपीएल टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा आज २ खेल हुँदै
अविरल वर्षाका कारण एकसातामा बाढी पहिरोबाट १७ जनाको मृत्यु, २२ जना बेपत्ता
राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा मै प्रश्न
दसैंमा ५ दिन बैंकका कुनै पनि कार्यालय नखुल्ने
दमौलीमा प्रर्दशन गर्ने कांग्रेसको तयारी, पौडेलले पुल पनि उद्घाटन गर्ने
संसदमा नेकपा दुई समूहको भूमिका कस्तो ?
दुई महिनामै १३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको तरकारी र फलफूल नेपाल भित्रियो